Izinketho Zohlelo Lokulashwa Kwemilutha Yokugembula - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Izinketho Zokulashwa Kokugembula Izindlela Zokugembula
Posted on August 14, 2020 August 14, 2020 Umbhali Andrew	Amazwana Off on Izinketho Zokulashwa Kokugembula
Ukugembula kungaba yinto ejabulisayo yesikhathi esisodwa noma, kwabambalwa abanenhlanhla, indlela yokuwina leyo jackpot engabonakali. Ngeshwa, abagembuli bangabona ngokweqile futhi baphoqelele ukudlala ama-ponies noma ngokudonsa i-bandit ehlomile. Bangazithola besenkingeni yokulutha okungabalimaza ngokwezimali, emphakathini, ngokwengqondo noma ngisho nasemzimbeni.
I-American Gaming Association ilinganisela ukuthi abantu abaningi baseMelika abangamaphesenti angu-1 bangaba ukugembula kwezifo. Uma uzithola ukulesi simo esikhathazayo, kunezinketho zohlelo lokulashwa kwezidakamizwa zokugembula ezingenza umehluko empilweni yakho. Silapha ukuzosiza futhi sifuna ukukuxhasa njengoba uthatha uhambo lwakho olubalulekile ubuyela empilweni engenakho ukulutha; sishayele u-24/7 namhlanje ukuze uqalise.
Yini Ebangela Ukulutha Ukugembula?
Ukulutha, kungakhathalekile into noma isenzo, bonke bathola imbangela yabo kwezengqondo. Ngakho-ke, yini ebangela imilutha yokugembula? Ngenkathi abantu abaningi bengaqala ukwenza noma ukuthatha okuthile njengomkhuba, amafomu okuluthwa lapho lowo muntu ethembela ngokwengqondo. Kalula nje, ukulutheka kulapho ungeke nje uyeke ukwenza okuthile ngokuzikhethela wedwa ngoba udinga okuphezulu, umphumela wokugcina noma ukugcwaliseka okukuhlinzekayo. I-Gamblers Anonymous ichaza ukuthi abagembuli bavame ukuba nomuzwa wokuthi bangalawula imisebenzi yabo kuyilapho abagembuli abalawulayo empeleni belawulwa yibo esikhundleni salokho. Lokhu kuqinisekile: Ngenkathi akekho umuntu okhetha ukulutha, kubalulekile ukukhetha ukuthi ungawuyeka nini ukubanjwa.
Uma uba umlutha wokugembula, impilo yakho yonke ingathinteka. Ungabhekana nokushabalala kwezezimali, ukulahlekelwa yikhaya noma ibhizinisi ngenxa yezikweletu zokugembula, ukuphela komshado noma ukulahlekelwa ilungelo lokugcina izingane, noma ukwehla kwakho emoyeni kungaholela ekuluthekeni okwengeziwe kanye nokugula kwengqondo. Kungakho kubaluleke kangaka ukubona inkinga kusenesikhathi, ukuze uthole usizo ekwelapheni ukulutha kwezokugembula.
Ngaphezu kwalokho, kulula kunanini ngaphambili ukuba umgembuli namuhla. Amakhasino ayavela ezifundeni eziningi, futhi kukhona ukufinyelela okulungele inqwaba yezindawo zokudlala online. Ungavumeli ukufinyelela okulula kukuholele wena noma obathandayo ekujuleni kwethemba. Esikhundleni salokho, sishayele namuhla ukuthola kabanzi mayelana nokwelashwa, izinsiza kanye namaqembu aseduze nawe. Siyatholakala nganoma yisiphi isikhathi lapho ushayela.
Ingabe Likhona Ikhambi Lokugembula?
Ukugula kwengqondo, njengokuphazamiseka ngokweqile noma i-anorexia, akunaso isiphetho lapho kuthiwa baphulukiswa khona. KwaGamblers Anonymous, amalungu azi ukuthi lokhu kuyiqiniso nangokugula kwawo. Ingabe likhona ikhambi lokugembula? Cha. Kodwa njenganoma ikuphi okunye ukulutheka, kungathathwa izinyathelo zokuqeda ukubamba ukugembula empilweni yakho noma kwezabathandekayo bakho. Noma ngabe ugembula ngaso sonke isikhathi futhi awukwazi ukuyeka noma ukuya kuma-binges aphuma ngaphandle kolawulo, isikhathi sokufuna usizo manje.
Izindlela zokwelapha zabagembuli
Imithi yokwelashwa yabagembuli iqhuba umdlalo kusuka ekwelashweni okunamandla kuya ekululameni okusekelwe eqenjini. Izinhlelo zokwelashwa zokulutha umlutha wokugembula akusona isiphakamiso sobukhulu obufanayo; esikhundleni salokho, udinga ukuzifundisa ngezinketho ongazithola wena nomndeni wakho, ukuze ukwazi ukuthatha isinqumo esifanele esiholela empumelelweni engcono kakhulu yawo wonke umuntu othintekayo.
Ukwelashwa Okuphathelene Nezimpawu Zokulawula Ukuqina
Izikhathi zokwelashwa kokuziphatha okwelashwa kwengqondo zikhombisile imiphumela ethembisayo ebusweni bezinhlobonhlobo zemilutha, kufaka phakathi ukugembula. Ngalokhu kwelashwa, uchwepheshe wezempilo yengqondo angasiza umlutha ukuthi abone izinqubo zokucabanga eziholele enkambisweni yokugembula. Isibonelo, abaningi abagembuli bagcina bekholelwa ukuthi uma beqhubeka nokubheja isikhashana, nakanjani bazowina i-jackpot enkulu abebeyijaha. Esikhundleni sephupho lengcebo, abanye abagembuli bazoqhubeka nokusebenza, benethemba lokuthi abawinile esikhathini esizayo bazokhokha izikweletu zabo zangaphambilini.
Ngenxa yesimo sengqondo sokulutha ukugembula, imizwa yomgembuli ingahle incike ngokuphelele ekuphakameni kwezimpungushe nakwezokwehla kokulahleka kwemicu. Ngokuselapha kokuziphatha okuqondayo, umuntu ogembula angaqala ukubona le mibono engalungile futhi asebenze ukuyilungisa. Lapho lezi zimbangela zezimpande zikhonjwa futhi zibhekiswa, wena noma othandekayo wakho ungaqala umgwaqo wokululama.
Izinketho zohlelo lokulutha ukugembula zifaka ezinye izindlela zokwelapha. I-Psychotherapy, noma umkhuba wokubhekana nezinkomba zokugembula ngokusebenzisa amaseshini wokwelulekwa ngamanye kanye neqembu, kungaholela emiphumeleni eminingi efanayo nokwelashwa kokuqonda kwengqondo, kufaka phakathi izimbangela zokubuyiselwa emuva kanye nokubuyisa ukuqonda okungalungile.
Ukwelashwa komndeni nakho kungaba yinzuzo kulowo ogembula umlutha. Uma uphoqa ukugembula, kungenzeka nomndeni wakho uthinteke. Ukwelashwa Komndeni akubhekiseli nje kuphela endabeni yokugembula uqobo kodwa futhi kubhekwana nokwelapha ubudlelwane bomndeni futhi kuqhubekela phambili endleleni yokululama ndawonye.
Ingxenye ebalulekile yokwelashwa kwezokugembula futhi kungaba umkhawulo wokufinyelela emathubeni okugembula. Lokhu kungaba nzima; abantu abaningi abakwazi ukugwema ukuchayeka ehhovisi iSuper Bowl echibini noma izikhangiso zokugembula ezibonakala kwi-Intanethi. Kepha ngokubeka umkhawulo okungenani ukufinyelela ezindleleni ezisobala futhi ezifinyeleleka kakhulu, umlutha wokugembula angaqala ukugxila ekuziphatheni kwabo okungalawuleki noma okuphoqayo, esikhundleni sokubhekana nokugwema kuphela.
Izikhungo Zokuhlala Zabagulayo Abagulayo Abagulayo
Uma wena noma othandekayo wakho ungumlutha wokugembula futhi lokho kuba umlutha kuholele ekukhetheni okwempilo okuya ngokuya kuba nzima nemiphumela, izindawo zokuhlala noma iziguli ezingalaliswayo zokulutha umlutha wokugembula kungaba yindlela engcono kakhulu yokululama.
Izinzuzo Zokwelapha Izindlela Zokuhlala Zokugembula
Izinzuzo zezindawo zokuhlala zokugembula zingafinyelela kude kunokunakekelwa kweziguli ngenxa yokuthi iziguli zikhona ukugxila ekululameni ngaphandle komsindo wempilo yansuku zonke. Umkhandlu Kazwelonke Wezinkinga Zokugembula ubala lezi zinzuzo:
Izinhlelo zokwelapha izingqinamba zengqondo nezokuziphatha
Ukwelashwa okuhambisanayo kwezifo ezihambisanayo
Ukuqashwa kwezokwelapha nezengqondo
Izikhungo Zokulutha Zokunethezeka Zokugembula
Ama-high-rollers adumile endaweni yokugembula, futhi babhekene nezinkinga ezifanayo zokulutha njengabagembuli bepenny. Umehluko, kunjalo, yikhono lokukhokhela imenyu eyengeziwe yokukhetha ngaphezu kweminikelo yokwelashwa yendabuko. Isibonelo, izikhungo zokulutha ngokunethezeka zentengiso zinganikeza izinto ezinjenge-spa kufaka phakathi ukubhucungwa, ukutholakala kwechibi nokushisa kweshubhu, kanye nolungiselelo oluningi. Ekugcineni, imilutha yokugembula ecebile ithola izinhlobo ezifanayo zokwelashwa kwengqondo njengabo bonke abanye abantu; bamane bakwenza esimweni esifana kakhulu nendawo yokuphumula ethe xaxa kunesikhungo sasesibhedlela.
Inzuzo eyodwa kunezinye izikhungo okungenzeka ukuthi izikhungo zokulutha ukugembula zingaba nazo, noma kunjalo, ukufinyelela okwandisiwe kochwepheshe bezokwelapha nabezengqondo. Abantu abakwazi ukukhokha ngaphezulu bangabonakala kakhulu, futhi lokhu kungaholela ekululameni ngokushesha kwesinye isikhathi.
Izinhlelo Zokuluthwa Kokugembula Eziphezulu
Izinhlelo zokulutha ezokugembula okuphezulu zilungiselela ochwepheshe abamatasa ababona ukuthi sekuyisikhathi sokwenza ushintsho emaphethini abo okubhubhisa, kepha abangenawo amandla okuchitha isikhathi esengeziwe kude nendawo yabo yokusebenza. Laba bachwepheshe, abafana nama-high-rollers, abangahle bakwazi ukukhokha ngaphezulu ukwelashwa kwabo, bangahle bakwazi ukufinyelela ezinhlelweni ezifushanisiwe, ezinjengezinhlelo zempelasonto kuphela. Izinhlelo zingahle zenziwe ngendlela ethile ukuphatha umlutha wazo ngenkathi zibavumela ukuthi babambe iqhaza ezindabeni zansuku zonke zezintshisekelo zabo zebhizinisi.
Izinhlelo Zokuvuselela Ukugembula Nezokwelapha
Izinhlelo zokuvuselelwa kwezokugembula ezingaphandle kanye nezinhlelo zokwelashwa zingavela emaqenjini afana neGamblers Anonymous kuya kumasethingi eqembu agadiwe kuya ekwelashweni okuqhubekayo ngakunye. Okuningi okungenziwa ngesisekelo se-inpatient nakho kungenziwa ngokwesilungiselelo esingaphandle kwesikhathi. Umehluko phakathi kwezinhlelo zokwelashwa kweziguli ezingalalisiwe nezeziguli ikakhulu ubude besikhathi esichithwa ekwelashweni. Izinhlelo eziningi zokwelashwa kweziguli zifaka ukwelashwa kweziguli okuqhubekayo ngemuva kokukhululwa kwesiguli. UMkhandlu Kazwelonke Wezinkinga Zokugembula uphakamisa ukusebenzisa izindlela ezilandelayo ukuthola uhlelo olulungile lokulapha ukugembula wena noma othandekayo wakho:
Isikhungo esigunyaziwe esinabasebenzi abaqeqeshwe ngokugcwele futhi abanamalayisense
Izinhlelo ezenzelwe izidingo zokulutha ukugembula
Ukuqashwa komeluleki oqinisekisiwe wokugembula
Enye yezinqubo-mgomo zokuthola kabusha ukugembula eyaziwa kakhulu yenziwa ngababhejeli abangaziwa futhi isuselwe ezinhlelweni eziyi-12 ezifana nalezo ezisetshenziswa yi-Alcoholics Anonymous kanye neNarcotic Anonymous. Abagembuli abangaziwa basebenzisana nabantu abayimilutha abavuma enkingeni yabo futhi bafuna ukulungisa njengoba nabo basebenzela ukululama ekubambeni kwabo ngokugembula. Inhlangano, evikela lonke ulwazi olwabiwe ngaphakathi kwezilungiselelo zemihlangano eziyimfihlo, isebenza ukuletha abagembuli abasanda kuvunywa endaweni lapho bangaqhubeka khona nezimpilo zabo, babuyisele noma ngubani olinyazwe ukugembula kwakhe futhi kamuva asebenze njengomeluleki kwabanye abasendleleni efanayo.
Uma wena noma othandekayo nibone ukulutha kwezokugembula, singakusiza ekutholeni imihlangano yangakini yokugembula engaziwa, izindawo zabangalaliswa noma izinhlelo zabangalaliswayo. Shayela namuhla ukugqashula amaketanga okugembula empilweni yakho bese uqala ukusebenzela ukuzithiba. Siqeqeshe abasebenzi abatholakalayo 24/7 ukusiza ngezidingo zakho lapho ushaya ucingo.
Imithi kadokotela kanye nemithi yokwedlula leyo
Imithi kwesinye isikhathi ingaba yingxenye ebalulekile yenqubo yokuthola kabusha ukugembula. Uma wena noma othile emndenini wakho ekugembula ngenkani, qaphela futhi usebenzise lawo makhambi anqunyelwe noma anconyelwe uchwepheshe ofanelekayo. Lapho ulawulwa ngumlutha owodwa, kulula kakhulu ukuwela komunye ngokuzelapha ngokwakho. Kodwa-ke, imithi enikezwe futhi yaqashwa udokotela wakho ingakusiza ekululameni kwakho konke.
I-University of Minnesota yaqedela ucwaningo eminyakeni eminingana edlule ukubheka umthelela wezindlela ezinjalo zemithi. Abahlanganyeli bayo abafundayo bawela emaqenjini amabili: labo abalawula umfutho ophansi kanye nalabo abavumela ukuziphatha okuphoqelelayo. Endabeni yabagembuli abayimilutha, imithi ejwayele ukusetshenziswa ezinhlelweni zokulutha izidakamizwa, njenge-naltrexone, itholwe inethonya elihle. Kubadlali bokugembula abalawulwa ngamandla, isifundo sasihlola izinto ezithinta i-prefrontal cortex yobuchopho. Uhlelo lwakho lokwelashwa olukhethiwe lungasiza ekuboneni izinketho ezinhle kakhulu zezimo zakho.
Ungasithola Kanjani Isikhungo Sokwelashwa Esihle Kakhulu Sokugembula
Ukuthola uhlelo lokwelashwa olulutha ukugembula okulungele wena noma obathandayo kungaba inqubo ende. Singasiza. Abasebenzi bethu bayakwazi ukuxoxa ngesimo sakho esihlukile futhi bakusize ubone ukuthi yiluphi uhlelo noma izindlela zokwelashwa ezingakusiza wena nomndeni wakho ukuba nibalekele ukuluthwa ukugembula. Ngakho-ke, sishayele namuhla ku, xoxa ngezinketho zakho nomunye wabeluleki bethu abanolwazi, bese uqala uhambo lokubuyela empilweni engenakho ukulutha.
Amakhuphoni we-Psychic alapha:
free ukufunda amakhuphoni
amakhuphoni okuhunyushwa ngamaphupho
amakhuphoni we-tarot namakhadi
psychic ukufundwa amakhuphoni
amakhuphoni ekhadi le-tarot
amakhuphoni we-tarot psychic
amakhuphoni omthombo wemilingo
amakhuphoni aseCalifornia wemilingo
amakhuphoni esikhungo sezengqondo
psychic uhlangabezana amakhuphoni
usa amakhuphoni wemilingo
1 Yini Ebangela Ukulutha Ukugembula?
2 Ingabe Likhona Ikhambi Lokugembula?
3 Izindlela zokwelapha zabagembuli
4 Ukwelashwa Okuphathelene Nezimpawu Zokulawula Ukuqina
5 Ezinye Izindlela Zokwelapha
6 Izikhungo Zokuhlala Zabagulayo Abagulayo Abagulayo
7 Izinzuzo Zokwelapha Izindlela Zokuhlala Zokugembula
8 Izikhungo Zokulutha Zokunethezeka Zokugembula
9 Izinhlelo Zokuluthwa Kokugembula Eziphezulu
10 Izinhlelo Zokuvuselela Ukugembula Nezokwelapha
11 Imithi kadokotela kanye nemithi yokwedlula leyo
12 Ungasithola Kanjani Isikhungo Sokwelashwa Esihle Kakhulu Sokugembula
13 Amakhuphoni we-Psychic alapha: